Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka DKMG oo si wayn u cambaareeyay Mahinga, – SBC
Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka DKMG oo si wayn u cambaareeyay Mahinga,
Xildhibaan Cawad Axmed Casharo oo ka mid ah golaha wakiilada DKMG ah ayaa si wayn u cambaareeyay danjire Augustine Mahinga waxana uu xildhibaanku ku cambaareeyay in uu siduu rabo ka yeelo siyaasada somaliya isagoo aan u haysan wax awood ah .
Xildhibaanka ayaa sheegay in mahinga uu guud ahaan la wareegay awoodii xukunka Somaliya isagoo sheegay in mahinga uu dhawaan qabtay shir uu isagu soo qaban qaabiyay isagoo aan wax latashi ah la samayn madaxda qaranka somaliya taasi oo meel kadhac ku ah dawladnimada iyo madaxbanaanida taasi oo uu sheegay in ay si wayn u cambaaraynayaan .
Xildhibaan Casharo ayaa sidoo kale sheegay in ay aad u badanyihiin dhaliilaha uu u soo jeedinayo Mahinga waxana markale uu carabka ku dhuftay in dhawaan uu aflagaago mahinga u gasytay madaxda qaranka Somaliyeed .
Xildhibaan casharo ayaa sidoo kale cadeeyay in ka xildhibaan ahaan ay ergaygaas u arkeen qof aan ka shaqaynayn horumarka umada somaliyeed dhinac walba oo ay ahaato haba ugu horeyso dhinaca horumarka iyo nabad ku soo dabaalida gudaha dalka somaliya .
Hadalkan cambaaraynta ah ee uu xildhibaan Casharo u soo jeedinayo Mahinga ayaa ku soo aadaya xili ku dhowaad 200 oo xildhibaan ay cabasho qoraal ah u gudbiyeen Ban ki moon taasi oo ka dhan ah Mahinga .
Hadaladan cambaaraynta ah ee ka soo yeeraya xildhibaanada ayaa ku soo aadaya xili magaalada moqdisho uu dhawaan soo gaaray xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee Ban ki moon, iyadoo ay noqonayso masuulkii u sareeyay ee katirsan qaramada midoobay ee soo gaara Moqdisho tan iyo markii ay burburtay dawladii dhexe ee somaliya mudo laga joogo 21 sano .
Xasan Cabdi Farey Gentelman